Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ | စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing ထောက်ပံ့ရေးနှင့် Resistance-
ယနေ့အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုကုန်သည်များသည်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းရန်နှင့်၎င်းတို့မှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကိရိယာများနှင့်ညွှန်းကိန်းများပြုလုပ်ထားသောလက်နက်များရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအတော်များများသည်ထိုကိရိယာများနှင့်ညွှန်းကိန်းများကိုအခမဲ့ပေးသည်။ မှန်ကန်စွာအသုံးချသည့်အခါနည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိရိယာများသည်အမြတ်အစွန်းလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, သင်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုပိုမိုမကြာခဏဝင်နှင့်ထွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကနေရှေးခယျြဖို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းရှိပါသည်။ နာမည်ကျော်နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် Bollinger တီးဝိုင်း.
အဆိုပါ Bollinger တီးဝိုင်းညွှန်ပြချက်ကဘာလဲ?
သင့်ရဲ့ expertoption ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာ Bollinger ခညျြအနှောင့်ချိန်ညှိခြင်း
သင်သည်သင်၏လမ်းပြအဖြစ် Bollinger တီးဝိုင်းညွှန်းကိန်းအသုံးပြုနေသည့်အခါဒီတော့အခါသင်ရောင်းမဝယ်သင့်သလဲ
ဒါကလမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ3လိုင်းများအားဖြင့်ကွဲပြားသော Bollinger ဇယားပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားလိုင်းများအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကို 95% ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒါကြောင့်သင်အထက်လိုင်းအထက်ဒါမှမဟုတ်ဇယားထဲမှာနိမ့်မျဉ်းအောက်ရွေ့လျားစျေးနှုန်းကိုရှာဖွေခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်အလွယ်တကူစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းစေနိုင်သည်။ အထက်နဲ့အောက်လိုင်းအကြား width ကိုခြေရင်းပျမ်းမျှအနေဖြင့်စျေးနှုန်းသှဖေ၏ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အဲဒီအချိန်တစ်အချို့ငွေပမာဏကိုကျော်တွက်ချက်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်မှု၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းလိုင်းထောက်ခံမှုဟုခေါ်သည်နေစဉ်အထက်လိုင်းတော်လှန်ရေးဟုခေါ်တွင်သည်။ ဤအလိုင်းများအဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဇယားအနှံ့ရွေ့လျားပေါ်လာသော်လည်း, သူတို့သည်အမှန်တကယ်တိကျတဲ့အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တိကျသောစျေးနှုန်းဖော်ပြသည်။ ဤသည်အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ချင်းစီအချိန်နောက်ခံစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများဖန်တီးလျက်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု 72.49 တစ်ထောက်ခံမှုစျေးနှုန်းနှင့် 74.53 တစ်ခုခံရှိပါတယ်ဆိုပါစို့။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်စျေးနှုန်း 80.04 မှကျဆင်းနေမတိုင်မီ 76.33 မှတက်မယ့်အတူတစ် uptrend ရှိပါတယ်။ 80.04 အသစ်ရဲ့ထောက်ခံမှုအဆင့်အထိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာပုံမှန်အားဖြင့်, 76.33 အသစ်ရဲ့ခုခံရေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ Bollinger ဇယားကို set up to ကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှသည်သုံးလိုင်းများအကြားခွဲခြားနိုင်ပါလိမ့်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တို့၏ကုန်သွယ်အကောင့်ရဲ့ထိပ်မှာအညွှန်းကိန်း '' icon ကို click လုပ်ပါ။ အသစ်ကညွှန်ပြချက် '' tab အောက်မှာ Bollinger ခညျြအနှောရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ Bollinger ဇယားလိုင်းများ '' လျှောက်ထားမနှိပ်ခင်သူတို့ရဲ့အရောင်နဲ့ width ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
Bollinger တီးဝိုင်းညွှန်းကိန်းတစ်ခုအစွမ်းထက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tool ကိုကိုသော့ကိုအင်္ဂါရပ်တွေတစ်ခုမှာစျေးကွက်အတက်အကျဖြစ်ပေါ်သည့်အခါဝင်သွားပါသည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အော်တိုဆုံးမခြင်းယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအတို့အကြား (တီးဝိုင်းရဲ့ width မှာရှာဖွေနေ
ခုခံရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေး) သင်ရေပန်းစားစျေးကွက်အခြေအနေများပြောပြနိုင်ပါတယ်။ တီးဝိုင်းတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်ကျဉ်းမြောင်းသောဖြစ်နေဆဲပါလျှင်ဥပမာ, စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်အားနည်းခြင်းနှင့်စျေးကွက်တစ်ခုအသုံးဝင်သောလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးမထားပါဘူး။
အဆိုပါ Bollinger တီးဝိုင်း width ကိုရုတ်တရက်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာစတင်သည်ပါကအသစ်တခုကိုလမ်းကြောင်းသစ်၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါစျေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်အနေအထားသို့ဝငျဖို့ပြင်ဆင်နေ start သငျ့သညျ။
သင်ဇယားထဲကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းသစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းခုခံလိုင်းအထက်မြင့်တက်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို ... ဖြစ်မည်
(စျေးကွက်မတည်ငြိမ်သောအခါ) အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုဒီမှာဆက်ရှိနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ကနဦးစျေးနှုန်းဆီသို့ဦးတည် drop ။ ဆန့်ကျင်ဘက်မြင်ကွင်းကိုလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းတဖြည်းဖြည်းပြန်မြင့်တက်ရှေ့တော်၌တခဏများအတွက်ထောက်ခံမှုအဆင့်အထိကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
သို့သော်အစွန်းရောက်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်များတွင်, သင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဒါကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနေကြသည်မဟုတ်ကွောငျးတှေ့နိုငျပါသညျ။ စျေးနှုန်းနောက်ဆုံးတော့တည်ငြိမ်ရှေ့မှာ uptrend တစ်ခုတိုးချဲ့အချိန်များအတွက်ကြောင်းဦးတည်ရှိနေဆဲပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါအချို့သောအချိန်ပြီးနောက်, စျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျကြပေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်သည်သစ်ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ဝေးကနဦးခုခံနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်အထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းအချက်များမှာဖန်တီးနေကြသည်ကွောငျးတှေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Bollinger ခညျြအနှောအကြောင်းကိုတစ်ခုမှာအေးမြအင်္ဂါရပ်တစ်ခုခုပေးထားအခိုက်မှာအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုရမှတ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်သောမီးခွက်၏ပါဝင်မှုသည်။ တစ်ဦး uptrend သို့မဟုတ် downtrend ခုနှစ်, သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုမီးခွက်ရုတ်တရက်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်
ရှည်။ ဤသည်အများအပြားအတိုမီးခွက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ထို့နောက်ရှည်လျားမီးခွက်ကနဦးအနေအထားဆီသို့စျေးနှုန်းရွေ့လျားအဖြစ်ပေါ်လာဘယ်မှာမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရှိပါတယ်။
အခုတော့ငါများသောအားဖြင့်ငါသည်ချက်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲလမ်းကြောင်းသစ်သတိထားမိအနေအထားထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါ uptrend ရှိပါတယ်သည့်အခါဝယ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦး downtrend ရှိပါတယ်သည့်အခါရောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အမြတ်ဖြစ်စေ, အစဉ်မပြတ်ငါတစ်နေရာရာမှာ (uptrend မှာ) ခုခံအထက်နှင့် (downtrend အတွက်) အထောက်အပံ့ကိုအောက်တွင်ငါ၏အသပိတ်စျေးနှုန်းထားတော်မူ၏။ ဤနည်း, ငါစျေးကွက်နောက်ဆုံးတော့တည်ငြိမ်မတိုင်မီငါသည်ငါ့ကုန်သွယ်မှုမထွက်ကြပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
Bollinger ခညျြအနှောတဲ့အစွမ်းထက်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ မျှော်လင့်, ဒီလမ်းညွှန်ကစမ်းဤညွှန်ပြချက်အကြောင်းသင့်စိတ်လှုပ်ရှားဆည်းပူးခဲ့သည်။
Tags: bollinger ခညျြအနှော, bollinger ခညျြအနှော Bitcoin, bollinger ခညျြအနှော cryptocurrency, bollinger ခညျြအနှောရှင်းပြခဲ့, bollinger ခညျြအနှော Forex, bollinger ခညျြအနှောမဟာဗျူဟာများ, bollinger ခညျြအနှောနည်းဗျူဟာ, bollinger ခညျြအနှောမဟာဗျူဟာ Forex, bollinger ခညျြအနှောကုန်သွယ်, bollinger ခညျြအနှောမဟာဗျူဟာများအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, bollinger ခညျြအနှောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, bollinger ခညျြအနှောကိုဖတ်ရှုဖို့ဘယ်လို, bollinger ခညျြအနှောကုန်သွယ်မှုဖို့ဘယ်လို, bollinger ခညျြအနှောသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, bollinger ခညျြအနှောဘာတွေလုပ်နေလဲ